Etu esi lelee profaịlụ nkeonwe na Instagram | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | General, Nkuzi
O doro anya na Instagram aghọla ngwa kachasị mkpa ma dị mkpa maka ịkekọrịta foto na vidiyo. Karịrị "nna" Facebook ya, ebe ọ bụ na ngwa a na-enye anyị ohere ịkekọrịta foto n'ụzọ dị mfe site na itinye nzacha na mbipụta dabara maka onye ọrụ ọ bụla. Dị ka ọ dị na Facebook, anyị nwere ike idobe profaịlụ anyị na nzuzo, nke mere na naanị ndị na-eso anyị nwere ike ịhụ ya ma ọ nweghị anya onye ọrụ ịntanetị ọ bụla.
Enwere ike ilele akaụntụ Instagram nkeonwe naanị ndị anyị nabatara na arịrịọ. Ezie na onye na-emeghe profaịlụ na-ahụ site na onye ọ bụla na-enweghị mkpa ọ bụla gara aga nzọụkwụ. Agbanyeghị, enwere ụzọ iji lelee profaịlụ nkeonwe na-agafe mgbochi a. Nke a bụ iwu zuru oke, onye ọ bụla nwere ike ime ya na-enweghị mkpa nka kọmputa. N'isiokwu a anyị kọwara otu esi ele profaịlụ nkeonwe na Instagram.
1 Etu esi lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe
1.1 Nyefee arịrịọ na-esote
1.2 Jiri akaụntụ adịgboroja
2 Ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ iji lelee profaịlụ nkeonwe
2.1 Lelee profaịlụ nkeonwe nke Instagram na Facebook
2.2 Lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe gị na Google
2.3 Lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe gị na hashtags
Etu esi lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe
Site na okike mmadu dika anumanu nile, anyi nwere mmasi nke mere na o di uto nke ukwuu ihu profaịlụ nke onwe nke Instagram. Maka nke a, anyị nwere ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi akọwa ha otu otu.
Nyefee arịrịọ na-esote
Anyị na-amalite site na ụzọ kachasị dị mfe ma dị mfe, ọ bụ ihe n'agbanyeghị na ọ dị mfe ma were anyị nke abụọ, ọ ga-ahapụ ndekọ nke akara anyị, ebe onye anyị chọrọ ịga leta ga-enwe arịrịọ na profaịlụ ha. Anyị na-ezigara onye ọrụ a arịrịọ ahụ na mgbe a nabatara ya, anyị nwere ike ịhụ profaịlụ Instagram ha n'ụzọ dị mfeỌ dị ka eziokwu, mana ọ bụ ụzọ kachasị mma iji lelee akaụntụ Instagram nkeonwe.
Jiri akaụntụ adịgboroja
Ọ bụrụ na anyị achọghị ịhapụ njirimara nke njirimara anyị na anyị chọrọ ịhụ profaịlụ nke onye ahụ na-enweghị ha amaghị na ọ bụ anyị, anyị nwere ike iji akaụntụ ụgha. Anyị na-eji profaịlụ adịgboroja mepụta profaịlụ adịgboroja ma zipụ arịrịọ na-esochi, ọ bụrụ na onye ọrụ a nabatara arịrịọ ahụ anyị nwere ike ịhụ profaịlụ ha na enweghị mgbochi ọ bụla. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ akụkọ ụgha na Instagram ma kee ọtụtụ maka ebumnuche ndị a.
Idingzo njirimara anyị bụ ihe dị mkpa, mana onye nwe profaịlụ nkeonwe ga-ekwenye na arịrịọ anyị yabụ na ọ dị mkpa iji motifị na-ekwenye ekwenye na foto maka akaụntụ adighi Anyị na-akwado iji ihe oyiyi na-enweghị ikike nwebisiinka ka okike nke akaụntụ ahụ ghara ịkpata anyị ụdị nsogbu ọ bụla.
Ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ iji lelee profaịlụ nkeonwe
Ọ bụrụ na ụzọ ndị gara aga (ndị dị mfe) anaghị arụ ọrụ anyị nwere ụzọ ndị ọzọ. Enwere ngwaọrụ iji lelee Instagram nke ga - enyere anyị aka ịhụ akaụntụ ndị ahụ. Ha niile nwere usoro nzuzo na ọnọdụ nke Instagram.
Lelee profaịlụ nkeonwe nke Instagram na Facebook
Enwetara Instagram na 2012 site na Facebook, maka nke a, netwọkụ mmekọrịta na - enwe njikọ zuru oke yana ọ ga - ekwe omume ịkekọrịta akwụkwọ Instagram n'otu oge na Facebook. Obi abụọ adịghị ya, ọmarịcha nhọrọ iji lelee profaịlụ nkeonwe nke onye ọ bụla nwere profaịlụ Facebook ha.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na profaịlụ nkeonwe nke mmadụ nwere akwụkwọ ha nke mere na mgbe a na-ebugo ha na Instagram, a na-ebugo ha na profaịlụ Facebook ha na nke a bụ ọha na eze, anyị ga-enwe ike ịnweta mbipụta ha ọ bụla na-enweghị mmachi ọ bụla.
Lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe gị na Google
Simplezọ ọzọ dị mfe iji mezuo ọrụ a bụ Google. Agbanyeghị na profaịlụ nkeonwe nke Instagram na-echedo nzuzo nke akaụntụ ahụ ka naanị ndị na-eso ụzọ nyere ikike hụ ọdịnaya ya, enwere ike ịhụ ihe ndị a na igwe nchọta Google Images
Mgbe ị na-abanye na onyonyo Google, anyị tinye aha onye ọrụ nke profaịlụ nkeonwe anyị chọrọ ịhụ, ụfọdụ foto nke onye ọrụ a na-enyocha na mberede ka ị na-ebipụta na igwe ọchụchọ ahụ. Nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ aha ndị ahụ ejiri ma ọ bụ ndị ọzọ nwere profaịlụ ọha na eze abanyela n'akwụkwọ ndị ahụ. Na usoro a, anyị na-ahụghị ya ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịme ọchụchọ na incognito mode nke ihe nchọgharị anyị.
Lelee profaịlụ nkeonwe nke onwe gị na hashtags
Y’oburu n’acho imata ihe obula, obula profaịlụ nke onwe nke ndi Instagram nke anyi n’enweghi ike inweta, enwere uzo di nkpa iji mee ya. Hashtags ma ọ bụ mkpado bụ ngwá ọrụ bara uru iji hụ ihe ndị ọzọ na-ekerịta. Agbanyeghị na profaịlụ bụ nkeonwe, mkpado ahụ bụ nke ọha, yabụ mbipụta ọ bụla gụnyere mkpado ga-ahụ ọtụtụ nde ndị ọrụ.
Ihe niile anyị ga - eme bụ ịgbaso hashtags ndị ahụ nke onye ọrụ Instagram nke anyị chọrọ ịhụ. Anyị ga-achọ ha na mmanya aro Instagram ma anyị ga-pịa "soro". N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ọ bụla anyị chọrọ ịhụ Instagram nkeonwe anyị ga-amarịrị na enwere ozi nkeonwe ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nkeonwe ọ bụ n'ihi na onye ahụ achọghị ịkọrọ ya onye ọ bụla. Anyị anaghị atụ aro ka ọha na eze mee ihe ọ bụla anyị ga-ahụ n’akwụkwọ ndị a ka ọ ghara imebi iwu ọ bụla na mpụ dịka izu ohi njirimara ma ọ bụ ihe a na-akpọ phishing nke anyị kwurula banyere ya n’isiokwu ọzọ.
Ngwaọrụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị hụrụ na ịntanetị, ọ ga-enye anyị ohere ịhụ akaụntụ Instagram nkeonwe na-esoghị ya. Anyị ga-eji ngwá ọrụ a mepee profaịlụ iji hụ akwụkwọ gị zuru ezu. Anyị kwesịrị ijide n'aka na ị gaghị emeghe ngwa a na ngwa mkpanaka gị.
Naanị anyị ga-emepe ngwa ọrụ ahụ ma tinye aha onye ọrụ nwere profaịlụ nke ya na Instagram. Ozugbo usoro a mechara, anyị ga-ahụ profaịlụ nke akaụntụ ahụ ma anyị nwere ike imeghe ya.
Ngwaọrụ ọzọ dị mma iji nweta ọdịnaya nke akaụntụ Instagram nkeonwe. Onye na-ekiri ọdịnaya a maka Instagram bụ n'efu kpamkpam na ọ ga-ezuru ịbanye weebụsaịtị ya ma soro profaịlụ anyị chọrọ ịnweta site na itinye aha. Iji ngwa ọrụ a zuru oke ma onye nwe akaụntụ ahụ agaghị enwe akara ọ bụla nke ọnụnọ anyị na profaịlụ ha. Ọ gaghị adị mkpa ka anyị banye na akaụntụ anyị iji ngwá ọrụ a.
Nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mfe iji lelee profaịlụ Instagram zoro ezo. Anyị ga - abanye naanị aha profaịlụ anyị chọrọ ịhụ. Ọ fọrọ nke nta ka anyị ga-ahụ profaịlụ nke onye ọrụ ahụ na ajụjụ. Naanị anyị ga-abanye na weebụsaịtị ha n'efu ma pịa bọtịnụ ọchụchọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi lelee profaịlụ nkeonwe na Instagram
Elephone R8 smartwatch nyocha